Ajụjụ maka Hungary - Aro maka Hungary, Australia na Brazil. - 1aviagem.com
Gara aga post: Belarus nke nwa amaala Belarus
Nkwupụta ozo: Ndụmọdụ - Malaysia - Batu Caves
Edebere 9 November 2018 1 comment site Römulo Lucena
Ya mere, taa, anyị ga-agwa mmadụ okwu, ọ dịkarịa ala ịmata. A mụrụ ya na Hungary, gafee China na ndụ n'Australia! Na nso nso a gara Brazil na mba Latin America. Ana m agwa Chris taa.
Anyị zutere n'oge njem nke malitere na Finland ma kwụsị na Germany, na-agafere Russia. Abụ m naanị Brazil, ọ bụ naanị Hungary.
N'ụzọ bụ isi anyị zutere na bọs. Ọ bụ otu onye nwere ọchịchọ siri ike ma nwee ike ịme nke ọma. Ọ dị mfe ịmụta asụsụ ọhụrụ ma biri na mba dị iche iche. O nwekwara umu anu ulo, obere ịnyịnya, M na-ekwu, nnukwu nkịta. Ọ mara mma nke ukwuu.
Kemgbe njem a, anyị nọ na kọntaktị ruo ugbu a, n'agbanyeghị oge mpaghara. Ọbụna ọ gara Brazil, bụ ebe anyị na-ezute ọzọ ma nweta oge. Ọ dị mma mgbe niile ịlele ndị enyi gị. Ana m agwa Chris taa.
Dị ka ọ dị na mbụ na ajụjụ ọnụ nke blog a, a ga-agbanwe agba nke ederede ahụ. Aga m agba agba ndụ, na agba agba agba. Ka anyị gaa ebe ahụ !!
1 - Chris, ebee ka amụrụ gị na ebee ka ị bi taa?
"A mụrụ m na Budapest, Hungary. Ana m ebi na Brisbane Australia taa.
2- Olee mgbe ị kwagara?
"œI kwagara mgbe m bụ 6 ọnwa.
3- Gini ka ichoro kacha mma banyere Hungary?
"Ihe oriri na papaya. Ihe ị nwere n'ebe a n'Australia anaghị enwe otu uto dị ka ebe ahụ.
4 - Gini ka ị ga-agbanwe na Hungary ma oburu na i nwere ike?
- "M ga-agbanwe usoro akụ na ụba. Ala ụgwọ na elu ahịa € |
5- Gini ka ị ga akwado ka onye njem nleta mee ma obu gara Hungary?
- "Budapest, ọ dị ka ọtụtụ obodo isi obodo. E nwere ọtụtụ ihe ị ga-eme ma hụ. Okwesighi ka i mee ngwa. Ógbè dị n'ebe ugwu dị ka Eger nwere ọtụtụ ihe ọ ga-enye.
6 - Maka Australia, ị ga-enwe ụfọdụ aro?
- Dịka mba ọ bụla ịchọrọ ịchọọ tupu ị mata ihe ize ndụ ndị ahụ na-echekwa nke a ga-emerịrị tupu njem ahụ. Dịka ọmụmaatụ, Crocodiles bụ nnukwu nsogbu na ọtụtụ ebe. Ma Oké Osimiri Naintree na Oké Nkume Ihe Mmiri Akara bụ ebe dị egwu.
7 - Na-ekwu ugbu a gbasara Brazil, olee otú ịnọ gị? Ànyị nwere ike imezi ihe ọ bụla? Kedu ihe ị ghọtara n'ozuzu gị, ọ dị gị ka ị nweghị nchebe?
"Obi dị m ụtọ na m ga-abịa ma leta gị ma hụ nleta na-eleta amazon! Ma achọtara m obodo ndị dị na São Paulo na Rio n'enweghị nsogbu. Ihe mbụ ị nụrụ banyere ha bụ akụkọ banyere mpụ. A gwara anyị ọtụtụ akụkọ (ma ọ bụ) eziokwu maọbụ na ọ bụghị naanị na ọ bụ mmanụ na-eme ka anyị ghara ịtụ ụjọ.
8- Amaara m na ị hụla fim ụfọdụ banyere Brazil, ụdị fim ọ bụla? Ị na-echeta aha onye ọ bụla?
"Ee, City nke Chineke bụ otu n'ime ha.
9- Na Brazil ị zutere yiri nke ahụ e sere na fim?
"Agaghị m aga favela. Achọrọ m ịga, ma ọ bụ ihe ọzọ na-achọ ịmata. N'otu oge ahụ ọ pụrụ ịbụ enweghị nkwanye ùgwù n'ebe ndị obodo ahụ nọ. I mekwara m nkwa na agaghị m aga ebe ahụ. ðŸ ~ †
"Eee, emeela m n'ezie, mana onye chọrọ ịga Rocinha n'oge nhoputa ndi ochichi! (Na ihe niile tan, enweghị ike ibudata ya dịka ebe) N'oge ọzọ, m ga-eso gị gaa, ma n'oge ahụ ọ dịghị mma.
10: Ị ga-achọ ikwu ihe ọzọ? Ma eleghị anya, ozi ga-adị n'ụwa! A ga-edebe ya na blog a.
"Ọ bụ ezie na a dọrọ m aka ná ntị banyere ihe ize ndụ ndị dị na Brazil, ọbụna site na ndị ntụziaka nke mpaghara m na-atụ aro ka ndị mmadụ gee ntị, mana jiri ndụmọdụ dịka ndụmọdụ, ekwela ka nke a buru ibu n'obi gị. Ọ bụrụ na ị na-echegbu onwe gị ịga njem, nke a ga-enyekwara gị aka ịnụ ụtọ njem ahụ. M ga-atụ aro ịga leta Amazon ọzọ, ọ dị ebube n'ebe ahụ. Amaara m na ọ na-ekpuchi ọtụtụ mba, ma ana m anọ n'akụkụ Brazil na Peruvian ma enwere m mmasị na ya.
- "Ekele gị maka uche gị.
- "Ana m ekele gị maka ajụjụ ọnụ.
"Achọrọ m ka ị lọghachi n'ụlọ gị."
Na ebe a anyị na-abịa n'ọgwụgwụ nke ajụjụ ọnụ ọzọ.
Tupu mmechi m ga-achọ ịhapụ echiche:
N'oge na-adịbeghị anya, netwọk Globo akpọwo "Brazil I Wantâ", nke ndị Brazil kwuru ihe ha tụrụ anya n'aka ndị ga-achị n'ọdịnihu.
Mana, Achọrọ m ịmalite mgbasa ozi dị iche iche: - "Gịnị bụ echiche nke Brazil na m ga - ahapụ?
Ị hụwo na nyochaa a na-ekwu banyere ọtụtụ ihe ike ma na ka taa maka ndị njem nleta. Ọbụna na fim ahụ echiche nke gafere bụ na Brazil bụ ebe dị ize ndụ. O zoro aka na ihe nkiri a -'Ibu Chineke ', mana m deputa ya maka "Carandiruâ €," œElite Troupeâ € na II. "Ndị njem nleta na gburugburu.
Echere m na dịka ndị Brazil, anyị nwere ike ịgbanwe nke ahụ. M na-ekwu okwu karịsịa nye ndị Brazil na-aga mba ọzọ, ma maka ọrụ, njem nleta ma ọ bụ ọmụmụ. Kedu ụdị echiche nke Brazil na ị na-ahapụ?
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhapụ nkọwa banyere ụdị echiche ị na-ahapụ ụwa n'èzí. Ma kesaa mkpọsa a na hashtag #ImpressaoBrasileira
Brazil nwere ọtụtụ ihe mara mma, ọdịdị, ọdịbendị, gastronomic, na enwere m nkwenye na ha dị ukwuu karịa egwu niile a. Ànyị ga-agbanwe ụzọ Brazil hụrụ?
Ònye maara oge ọzọ m nwere ike ịkpọ ndị njem nleta na Rocinha? (Ị ga-enyere m aka?).
N'okwu na-esonụ m na-ekwu maka ahụmahụ nke ịnweta ndị njem nleta na Brazil.
Maka ozi ndị ọzọ dịka nke a, pịa bọmbụ map dị n'okpuru ebe a.
Ajụjụ ọnụ Amazonia Australia Brasil budapest Obodo Chineke mpụ na-arụ ọrụ ma ọ bụrụ na Ajụjụ ọnụ favela nnukwu ihe mgbochi Hungary Na Ọrụ Mbipụta egwu Russia ndokwa Ndị agha ndị agha onye njem nleta
Pingback: Anyị gbara nwanyị nwanyị Mexico ajụjụ ọnụ ma wetara Aro na ndụmọdụ Coronavirus na Mexico - 1aviagem.com